About Us - Suzhou Ocan polymer Waxyaabaha Co., Ltd
XAASHIDA PET / LIISKA
Clear xayawaanka oo duudduuban
sheet xayawaanka Clear
XAASHIDA PVC / LIISKA
Dhalaalaya sheet Black PVC / duudduuban
sheet Matt Black PVC / duudduuban
Sheet PVC Clear / Clear PVC Roll
Dhalaalaya sheet midabka leh PVC / duudduuban
sheet Matt midabka leh PVC / duudduuban
Dhalaalaya sheet White PVC / duudduuban
sheet Matt White PVC / duudduuban
XAASHIDA ESD PVC
Suzhou OCAN polymer Waxyaabaha Co., Ltd waxa uu ku yaalaa degmada horumarinta Suzhou la caasimada diiwaangashan 35 milyan. OCAN waa qof ku taqasustay soo saarka ee PVC / PET (oo ay ku jiraan shabaqa, duub, film) muddo ka badan 20 sano. Currently, OCAN 14 khadadka-soo-saarka sare, gaadho awoodda bishii 3500 tons. waxyaabaha lagu ballaaran codsatay in sida daabacaadda, baakadaha, duubo durbaanka, qalabka xafiisyada, qalabka korontada iyo warshadaha daaweynta biyaha.
OCAN mar walba taageera ruuxyada "Daacadnimo", "waaqiciga ah", "Innovation" iyo "Win-Win" ilaa markii la dhisay. Waxaan kaliya ma ahan siin alaabta oo tayo sare leh, laakiin sidoo kale ugu adeegno macaamiishayada oo dhan xqqa. Ku soo dhawoow inaad la xiriirto iyo iskaashi!
suzhou Ocan polymer Waxyaabaha Co., Ltd waa PVC xirfadeed iyo soo saaraha PET. 20 sano ee R & D, shirkad wax soo saarka iyo experience.The iibka faraha kula jiro line extrusion & calerdering.
OCAN helo noocyo kala duwan oo shahaado patent, waxyaabaha farsmada heerka sare ah, Shiinaha brand-magaca shirkadaha, ISO9001: 2008 shahaadada nidaamka iyo imtixaanka by SGS gaaraan, ROHS iyo shuruudaha imtixaanka deegaanka. 30000tons qiimaha wax soo saarka Annual.
PVC taxane hufnaan
PVC sheet taxane frosted
PVC taxane cad
PVC taxane madow
taxane midabka PVC
PVC oo jilicsan taxane filimka
taxanaha bireed PVC
duubo PVC durbaan
Taxanaha PET A
dusha ka dhammaatay, dhalaalaya ama Matt / gadaaman
size caadiga ah:
700 * 1000mm, 1000 * 1400mm, 915 * 1220mm, 915 * 1830mm, 1000 * 2000mm, 1220 * 2440mm ama sida ay doorasho macaamiisha.
Ku soo dhawow oo nala soo xiriir! Waxaan rajeynaynaa in aan dhiso muddo dheer, xidhiidhada la isku halayn karo, oo wanaagsan oo lagu kalsoonaan karo idinla u tahay horumarka caadiga ah.
Mabda'a Tayada: Dad-dhisan, ka qaybqaadashadu, heer sare, Cusub oo lagu qanco
Goal Tayada: Product Rate wadeenka> = 99%
Qanacsanaanta Customer> = 78%
In-time Rate Delivery> = 98%
No.68 Shiyang Road New & teknoolojiyad sare Horumarinta Degmada Suzhou Shiinaha
Shirkadda abaabulay taxane ah oo muxaadaro ...
Waa maxay ESD super Sheet PVC cad?